🥇 ▷ Sida loo rakibo Samsung Galaxy Note 10 / Galaxy Note… ✅
Sida loo rakibo Samsung Galaxy Note 10 / Galaxy Note…
Talaabooyinkan, ku cusbooneysii Samsung gacanta Galaxy Note 10 iyo Galaxy Note 10 Plus ee cusboonaysiinta amniga cusub ee Sebtember 2019. Tani waa shirkada labaad ee Samsung ay sii deysay Ogeysiis cusub 10. In kasta oo wax ka yar hal bil jir, dhismahan cusub ayaa hadafkiisu yahay Hubso in macaamiisha cusub ay khibrada ugu fiican ka helaan taleefankooda cusub. Soo bixintan qaaska ah, Samsung waxay diiradda saareysay bixinta tillaabooyin ammaan oo ugu dambeeyay oo ay weheliso horumarinno iyo xoojinno kale. Si dhakhso leh ayaad u cusbooneysiin kartaa Galaxy Note 10 o Xusuusin 10+ adigoo isticmaalaya tillaabooyin gacanta ah horay u sii gala!
Wax yar ka hor intaadan ku boodin tallaabada, hubi inaad haysatid xog buuxda oo taleefankaaga gacanta ah si aad hadhow u soo celiso haddii loo baahdo. Isagoo ah sii deyn rasmi ah, Samsung wuxuu casriyeynta cusub ee Sebtember 2019 u diyaariyey qof walba Galaxy Note 10 iyo Galaxy Note in ka badan 10 taleefan. Si kastaba ha noqotee, maxaa yeelay waxay leedahay dhulal badan oo ay ka hadli karto, cusboonaysiintaan ayaa laga yaabaa inay la kulanto dib-u-dhac qaybo ka mid ah adduunka. Haddii aadan helin dhisme cusub ama aadan rakibin mod gaar ah aaladdaada moobiilka, halkan waxaa ah sida gacanta loogu cusboonaysiiyo cusboonaysiinta Sebtember 2019. Intaas waxaa sii dheer, tusahan ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu soo celiyo goobaha warshadada Samsung Galaxy Note 10 iyo Galaxy Note 10 oo lagu daray.
Diidmo: U adeegso tilmaan-bixinta halistaada. Annaga oo ah TeamAndroid mas’uul kama noqon doonno haddii aad tirtirto ama aad dhaawacdo qalabkaaga. Intaa waxaa sii dheer, qalabka korantada, nidaamka faylka ama arjiga la adeegsaday ay yihiin hantida milkiilayaashooda.
Sebtember 2019 Galaxy Note 10 / Xusuusin Faahfaahin ka badan 10 firmware:
Cusboonaysiintaan cusubi inta badan waxay keentaa roondadii ugu dambeysay ee Sebtember 2019. Marka lagu daro amniga la wanaajiyey, qalabkan firmware-ga ah wuxuu hagaajin doonaa tayada maqalka isagoo adeegsanaya qalabka dhegaha la gashado. Intaas waxaa sii dheer, waxaan sidoo kale rajeyneynaa horumar iyo hagaajin cayayaanka cusboonaysiinta.
Casharkan tabinta firmware wuxuu khuseeyaa noocyada kaladuwan ee Galaxy Note 10. Nambarada moodeelada gaarka ah ee uu tilmaamayo tusahan ayaa kor lagu taxay.
Si aad u hubiso inaad haysato Samsung Galaxy Note 10 moodello / noocyo kala duwan, fur Dejinta> Telefoonka ku saabsan> Lambarka Moodeelka.
Waxaad ka heli kartaa soo socda Galaxy Note 10 maqaallo xiiso leh oo la xiriira:
Haddii aad qorsheynaysid inaad xididdid taleefankan ama wali jahwareersan tahay, maxaad u xididaysaa? Galaxy Note 10, aqriso: Faa’iidooyinka xididka aaladdaada Android.
Samsung Galaxy Note 10 darawallada USB
Waa inaad ku xiraa taleefankaaga Android kumbuyuutar. Taas, hubi inaad ku rakibtay darawalka USB-ga Samsung Galaxy Note 10 si sax ah. Haddaysan ahayn, waxaad kala soo degsan kartaa darawalka rasmiga ah ee ugu dambeeyay qeybta qeybta ‘USB USB Drivers’ halkan:
Soo dejiso Samsung Galaxy Note 10 darawallada USB!
Wax walbaa diyaar ma yihiin? Hagaag hadda waad sii wadan kartaa aqrinta hoose iyo cusbooneysiinta Galaxy Note 10 ee casriyeynta qalabka rasmiga ah ee Windows Pie.
Sida loo rakibo cusboonaysiinta qalabka ‘firmware’ ee bisha Sebtembar 2019 ee Galaxy Note 10 / Xusuusin 10 in ka badan
Si horay loogu sii socdo, waxaan leenahay talaabo faahfaahsan oo talaabooyin talaabo ah oo aad ku cusbooneysiin karto Samsung Galaxy Note Samee Qalabka Android 10 Pie illaa Sebtember. Shirkadda firmware-ka waxaa si rasmi ah u saxeexay Samsung waxaanan u isticmaali doonnaa ODIN kii ugu dambeeyay ee aan u isticmaali karno Galaxy Note 10
Fadlan si taxaddar leh u akhri qadka kasta oo hubi inaad aqriso casharka ka hor intuuna ku muuqan qalabkaaga.
Si loo xasuusto:
Casharradan waxaa loogu talagalay oo keliya Samsung Galaxy Note 10. Ha ku tijaabin tan taleefannada kale duwan.
Qalabka shirkadda ee loo adeegsado daabacaadan ayaa ah Samsung siidayn rasmi ah oo loogu talagalay Galaxy Note 10
Hubso inaad keydiso dhammaan xogta taleefankaaga kahor intaadan sii wadin.
Tilmaamaha tallaabo-tallaabo oo dhammaystiran:
Tallaabada 1 – Ka soo dejiso cusboonaysiinta Android Pie isku xirka hoose faahfaahinta tafaasiishaada Galaxy Note 10 kumbuyuutarkaaga oo ka saar faylka zip.
Tallaabada 2 – Soo dejiso Odin, kaas oo kaa caawin doona inaad ku rakibto cusbooneysiinta Android Pie Samsung Galaxy Note 10
Tallaabada 3 – Demi Demi taleefankaaga. Haddaba, gali habka soo dejinta. Sidee? Riix oo wada haaya badhamada mugga + Banka Bixby, ka dibna riix batoonka awooda illaa aad ka aragto robotka dhismaha ee Android iyo saddex xagal. Mar labaad riix Awood si aad u xaqiijiso inaad gasho Nidaamka Soo Dejinta.
Tallaabada 4 – Hubso inaad haysato Galaxy Note 10 darawallada USB ee kumbuyuutarka lagu rakibay.
Tallaabada 5 – Fur ODIN kombiyuutarkaaga. Ku xir qalabkaaga mobiyuutarka kombiyuutarka markii qalabkaagu ku jiro qaab soo degsan.
Tallaabada 6 – Haddii taleefankaaga gacantu uu si guul leh ugu xidhan yahay, hal Aqoonsi: Sanduuqa COM wuxuu isu beddelayaa jaallac lambarka dekedda ee COM. Talaabadani waxay qaadan kartaa waqti.
Tallaabada 7 – Hadda xulo feyl aad u baahan tahay inaad ku shiddo / rakibto taleefankaaga gacanta. Faylashaani waxaa laga heli karaa galka galka laga soo saaray Tallaabada 1.
Guji ‘AP’ oo dooro faylka leh ‘AP’ magaceeda.
Guji ‘CP’ oo dooro faylka leh ‘MODEM’ magaceeda. Ka gudub tilaabadan haddii aysan jirin faylal noocaas ah.
Guji ‘CSC’ oo dooro faylka ‘CSC’ magaceeda. Ka gudub tilaabadan haddii aysan jirin faylal noocaas ah.
Guji ‘PIT’ oo xulo faylka .pit. Ka gudub tilaabadan haddii aysan jirin faylal noocaas ah.
Guji ‘BL’ oo dooro faylka leh ‘BL’ magaca. Iska indha tira haddii aysan jirin faylal noocaas oo kale ah.
Haddii aad isticmaaleyso nooc hore oo ah ‘ODIN’ ama qalab aad u badan oo aan lahayn qaabka faylka lagu xusay, fadlan tixraac soo gaabinta qaabkii hore ee magaca hoose. Fadlan la soco in kaliya isbeddelada lagu sameeyo magacyada, howlaha, iyo howlaha asalka ay ahaanayaan isku mid, markaa ha walwelin.
Tallaabada 8 – ODIN, eeg Dib u bilaw Y F. Waqtiga dib u deji Kuwa la doortay. Sida Dib ucelinta xulashooyinka, HADAL KELIYA haddii aad dooratid faylka .PIT tallaabooyinka hore.
Tallaabada 9 – Hadda guji batoonka Bilowga ee ODIN. Habka rakibida ayaa bilaaban doona waxayna qaadan doontaa dhowr daqiiqo in la dhammaystiro.
Tallaabada 10 – Kadib marka rakibida la dhammeeyo, taleefankaaga ayaa dib u bilaabi doona. Kadib markaad fiiriso shaashadda guriga, taleefankaaga ka saar kombuyutarka.
Taasi waa dhamaan samsung Galaxy Note 10-kaaga hadda waxaa lagu cusboonaysiiyay cusboonaysiinta qalabkii qalabaynta ee Android Pie. Aad Xeerarka> Wixii taleefanka ku saabsan si aad u hubiso.
Beddel iyo talooyin kale oo muhiim ah
Eeg talooyinka soo socda iyo qodobbada muhiimka ah ee wax laga qaban karo. Tani waa muhiim, maxaa yeelay ma rabno in qofna lumiyo xogtooda ama codsiyadooda.
Had iyo jeer sameyso kaydinta xogtaada muhiimka ah ee aad u baahan karto ka dib markii aad ku rakibto casriyo cusub, casriyeyn rasmi ah oo software ah ama wax kasta. Dib u dhig haddii ay dhacdo, waligaa ma ogaan kartid goortu wax qaldamaan. Akhri: Sida loo taakuleeyo barnaamijyada Android, fariimaha qoraalka, WhatsApp, taariikhda wac.
Isticmaalayaasha Samsung waxay kaloo kaydsan karaan xogta Samsung Smart Switch kombiyuutarkaaga. Intelligent Switch wuxuu ka caawiyaa wareejinta xogta guud ahaan aaladaha kala duwan ee Android, oo ah Samsung Galaxy S7 gurmad xogta Samsung Galaxy Note 10
Haddii aad horay u haysatay soo kabasho qaas ah (ClockworkMod, TWRP, iwm.) Oo lagu rakibay taleefankaaga, waxaan kugula talineynaa inaad u isticmaasho maxaa yeelay waxay abuureysaa sawir buuxa oo telefonkaaga hadda ah. (Casharka: Sida loo taakuleeyo taleefanka Android adoo adeegsanaya TWRP)
Qaar ka mid ah tilmaamaha ikhtiyaariga ah ee aad ku xasuusato
1. Miyaad dhibaato ku qabtaa inaad ku xidho taleefankaaga Android kumbuyuutar? Waa inaad karti u siisaa habka USB wax maqdinta. Halkan ka eeg: Sida loo Hawlgeliyo USB Debugging: Loogu talagalay Gingerbread, Ice cream Sandwich, Jelly Bean, KitKat, Marshmallow, Nougat iyo Oreo.
2. Hubso in qalabkaaga Android uu kugujiro batteri ilaa 80-85%. Tani waxay kaa caawin kartaa: Sida loo hubiyo boqolkiiba baatariga. Sabab? Sababtoo ah haddii taleefankaaga si lama filaan ah u xiro markaad rakibayso ROM gaar ah, rakibi muraayad rasmi ah ama aad ku rakibto mod, iwm. – Taleefoonkaaga gacanta ayaa laga yaabaa inuu waxyeello ama si joogto ah u dhinto. Cidina ma rabto taas, sax?
3. Inta badan casharada iyo sida loo hago qalabka Android waxaa loogu talagalay taleefannada Android iyo kiniiniyada oo aan warshadda lagu qufulin. Waxaan kugula talineynaa inaadan tijaabin tusahayaga haddii taleefankaaga uu ku xiran yahay howl wadeenka, haddii aan go’aamineynin magaca ama nooca aaladda aaladda.
Tani waa aragti faahfaahsan oo ku saabsan sida loo cusbooneysiinayo Samsung gacanta Galaxy Note 10 iyo Galaxy Note Cusboonaysiinta 10+ ilaa Sebtember 2019. Haddii aad dhibaatooyin ama arrimo qabtid, fadlan nagala soo xiriir qeybta faallooyinka.